Valan-java-manahirana ny valan-javaboaharin'ny mpiady, Kingsport, Tennessee
Ny Golf Course Path State Warrior, Kingsport, Tennessee, ampahany ao amin'ny Tennessee Golf Trail , dia milalao 6.600 metatra avy amin'ireo toro-hevitra ho an'ny 72 mitana ny laharana 71.5 sy ny fihenan-danja amin'ny 123. Nataon'i George W. Cobb , ny Path Golf Course Warrior dia iray amin'ireo toerana mahafinaritra mahafinaritra any amin'ny tendrony avaratra atsinanan'i Tennessee - saika any amin'ny tampon'ireo Appalachiana, fa tsy tsara. Ny lalan'ny golf dia napetraka eo amoron'ny reniranon'i Fort Patrick Henry Lake, ary toy ny toerana tsara tarehy tahaka izany ihany koa.
Ny farihy, ny toerana mihetsiketsika, ny sehatra goavam-be, izay mamakivaky ny lembalemban'ny volkano miloko mena midorehitra, ny tsirairay avy no mibontsina ny maitso maniry, ny rehetra mba hahatonga ny Warrior's Path ho fifaliana ho toy ny golf iray. Tsy mahagaga àry, fa ny lalao dia tena tia indrindra amin'ireo mpilalao golf ao amin'ny faritr'i Tri-Cities.
Na dia tsy mandeha milalao golf aza aho dia te hamporisika anao aho hitsidika ny valan-jaridahan'i Warrior's Path State. Raha tia ny goavana lehibe ianao, dia ho tia ny làlan'ny Warrior satria izy no manolotra zava-baovao tena miavaka tahaka ny any amin'ny firenen'i Tennessee. Nantsoina ho an'ny ady teo Cherokee eo an-toerana sy ny lalan'ny fifamoivoizana ny valan-javaboary, ary io dia toerana mahazatra ho an'ny mpandeha, mpisava lalana ary maoderina. Androany, ny zaridaina 950 hektara, indray mandeha amin'ny ampahany amin'ny harenan'ny TVA dia malaza fa tsy ny mponina ao an-toerana, fa ny mpitsidika ihany koa. Eo amin'ny onin'i Patrick Henry Reservoir TVA sy ny reniranon'i Holston, dia iray amin'ireo valan-javaboarim-panjakana mahazendana indrindra ao Tennessee, ny fanaovana ny golf noho izany dia mahatonga izany bebe kokoa.
Hazo maitso: Tsy azoko mihitsy hoe nahoana no gara be ny golf amin'ny faritra sasany, indrindra rehefa mandinika ny vidiny maitso toy izany ianao - tsy maintsy ho ireo trano ireo, heveriko fa. Na izany na tsy izany, ny saram-pandrosoana ao amin'ny Kianja Warrior dia antony tsara ho an'ny fananganana fitsidihana: Ny tahan'ny herinandro ho 18 latsaka, amin'ny vanim-potoana (1 martsa hatramin'ny oktobra), dia $ 17 fotsiny, miaraka amin'ny sari-tanany $ 32.
Amin'ny faran'ny herinandro, ny taham-pidirana 18 lava miaraka amin'ny sari-tanany dia $ 36. Tsy misy tsara noho izany.
Nandeha imbetsaka ny lalao golf tany amin'ny Paths Warriors aho ary nahafinaritra ahy foana ny traikefa. Ny zavatra tsy fantatro fony aho nitsidika ny valan-javaboary dia hoe ny layout dia voatondro ho Sanctuary Miarahaba ny Audubon avy amin'ny Audubon International . Ny làlan'ny Warriors dia ny kianja golf an'ny alikaola ao Tennessee hahazoany voninahitra toy izany, ary ny fahaefatra ao amin'ny rafi- panjakana Tennessee State Parks , ary ao amin'ny Tennessee Golf Trail, dia hajaina. Ireo toeram-pitsangatsanganana an-dalamby tany Paris Landing , ny Harrison Bay sy ny valan- javaboarin'i Fall Creek Falls koa dia nahazo ny fanamarinana. Tena zava-dehibe ve ny homem-boninahitra? Miala tsiny ianao fa satria latsaky ny 800 eo ho eo ny golf amin'ny Golf dia nomena anarana hoe Sanctuaries Audubon Cooperative .
Tee Times: Mila birao iray ianao, 7 andro isan-kerinandro. Ny fotoana tiana azo havaozina 6 andro mialoha. Antsoy ny isa voalaza etsy ambany.
Azonao atao ny mijery ny tahan'ny hotely ao Kingsport, TN.
Toeram-piantsonan'ny fiarandalamby, Hemlock Road, Kingsport, TN 37663; (423) 323-4990
Miverena any Tennessee Golf Trail sy ny Tranon'ny Tranon'ny Tranona
Ahoana no ahatongavana any:
Kingsport, TN dia tohanan'ny seranam-piaramanidina Tri-Cities.
Ny seranam-piaramanidina dia ampiasaina amin'ny seranam-piaramanidina amerikana lehibe indrindra, United, Delta, Continental, US Air, ary Amerikana.
Ny fotoam-bavaka dia mamirapiratra ao amin'ny PGA Golf Club, PGA National Resort
Ny Park State State Park sy ny Golf Course, Buchanon, Tennessee
Ny gorobaka tsara indrindra 7 tsara indrindra hividianana ny 2018
Review of Innisbrook Resort Amenities
Ny 8 Best Golf Shoes hividy amin'ny 2018
The most amazing floating swim in Austin, TX
Sakafo tsara indrindra any amin'ny faritr'i Washington, DC
5 Louisiana Tanàna Tianao Tena Mila Mitsidika
Zavatra kely momba an'i Lakewood, Ohio
Nosy Labuan, Malezia
Pumpkins patina ao amin'ny faritr'i San Francisco Bay
Ny Art Institute of Chicago
Zava-mahagaga natao tamin'ny ankizy tao Memphis
Wertheim, Alemaina - Port of Calling European River Cruise
Ny Bakeries tsara indrindra any Parisy
Top 4 Toby tany Queens, New York